Reolink Argus 3, kaamiro amni oo banaanka aad u dhameystiran | Waxaan ka socdaa mac
Dhowr usbuuc ka hor waxaan helnay inaan tijaabino kamaradda amniga Argus PT oo ka socda Reolink kiiskan waxaan fursad u helnay inaan tijaabino cusub Reolink Argus 3. Kani sidoo kale waa kamarad amni laakiin leh xoogaa kala duwanaansho cad oo ku saabsan qaabkii hore loo eegay iyo in si macquul ah ay u leedahay waxyaabo fiican iyo waxyaabo xun haddii aan dooneyno inaan isbarbar dhigno. Xaaladdan oo kale is barbardhigi mayno labadan moodal maadaama ay gebi ahaanba ka duwan yihiin iyo hawlo kala duwan.
Argus 3 wuxuu ku darayaa nalka 6500K LED taas oo awood u leh inay si cad diiradda u saaraan dhaqdhaqaaqa laga dareemay aagga isla markaana sidoo kale ku darsada qaylo-dhaanteeda ay ku jirto. Kaamirada cusub ee Reolink waa mid iswaafaqsan waxayna soo bandhigeysaa nashqad caqli gal ah oo meel walbo lagu dhajin karo, taas oo ka dhigaysa howshan mid aad u fudud.
Halkan ka iibso kamaraddaada amniga ee Reolink Argus 3
1 Qalabka PIR ee dareeraha dhaqdhaqaaqa leh firfircoonaanta LED
2 Kaamiro gebi ahaanba wireless ah
3 Is-maamul-wanaagga wanaagsan ee Reolink Argus 3
4 Kordhinta kamarada iyadoo la isticmaalayo qaansooyin ama cajalad
5 Qaar ka mid ah qeexitaannada ugu muhiimsan ee kamaraddan amniga
6 Reolink Argus 3 Qiime
Qalabka PIR ee dareeraha dhaqdhaqaaqa leh firfircoonaanta LED
Marka dhaqdhaqaaq lagu ogaado kanaga CMOS shidma kamaraddu si toos ah ayey u kicineysaa nalka LED-ka ee awoodda badan, kaas oo noo siyaadinaya nabadgelyo gelitaankeena guriga, barxadda, iwm. Xaaladdan oo kale, haddii aan dooneyno, waxaan ku habeyn karnaa alaarmiga firfircoonida isla dhaqdhaqaaqa, laakiin taasi si buuxda ayuu ugu habeyn karaa isticmaalaha barnaamijka.
Dareemahan dhaqdhaqaaqa waa mid caqli badan, sidaas darteed wuxuu awood u leeyahay inuu kala sooco aadanaha iyo cayayaanka ama laamaha iyo caleemaha dhici kara muraayadaha hortooda. Sida moodooyinka kamaradaha amniga ee shirkadda intiisa kale, Argus 3 wuxuu leeyahay dhammaan xulashooyinka qaabeynta haddii ay dhacdo in aan guriga ku haysano xayawaan iyo kudar digniinta codka mahad laba-geesood leh maqalka.
Kaamiro gebi ahaanba wireless ah
Fiilooyinka kaliya ee ay kamaradani heysato waa midka lagu daro si uu u buuxiyo batterigiisa iyo Qalabka qorraxda ee aan biyuhu qorin (si gooni gooni ah ayaa loo iibiyay) kaas oo aan had iyo jeer ku ilaashan karno kamarad batari ku socota. Dareenkaan, waa qalab muhiim ah oo aan qaali aheyn taas oo naga dhigeysa inaan iloobo inaan ku qaadno kaamerada marar badan. Waxaan dhihi karnaa waa qalab aad u xiiso badan laakiin aan qasab ahayn hawlgalka saxda ah ee kamaradda amniga.
Isku xirka Argus 3 ee shabakada waxaa lagu sameeyay isku xirka 2.4 GHz Wi-Fi Mana aha daruuri in la fuliyo habka qaabeynta, runti waa fududaan iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Reolink ay iyadu bixiso isla markaana la jaan qaadi kara dhammaan Mac, iPhone iyo aaladaha kale ee hadda jira.
Dib u furfree
Is-maamul-wanaagga wanaagsan ee Reolink Argus 3
Haddii aan ka hadalno ismaamul kamaradan Waxay qabtaa sida ay soo saaraha u dhexeeya 2 iyo 6 bilood kadib kharash buuxa. Kama hayn kamarada muddo dheer laakiin waxaan aaminsanahay in tani ay tahay tan iyo markii 5200 mA ee kani uu siinayo waqti badan waqtigan iyadoo kuxiran waqtiyada ay LED-yada, dareemayaasha, digniinta, duubista iyo kuwa kale dhaqaajinayaan.
Adabtarada korontada ee 5V / 2A ayaa loo baahan yahay kumana jiro Sanduuqa gudihiisa, waxa lagu daray waa fiilada microUSB Shirkaddu lafteedu waxay kugula talineysaa in la isticmaalo qalabka qoraxda ku shaqeeya oo runtiina waa ikhtiyaar aad u wanaagsan oo lagu buuxiyo batteriga kamaradda.
Kordhinta kamarada iyadoo la isticmaalayo qaansooyin ama cajalad
Waxaan ku dhejin karnaa kaamerada siyaabo kala duwan tan ugu macquulsanina waxay tahay iyadoo labo dalool laga qodo gidaarka si meelaheeda loogu xiro sagxadaha ka dibna lagu hagaajiyo kaamerada sida aan ujeclaanay, laakiin kamaradan ayaa ku dareysa seddex ikhtiyaar oo kala duwan oo loogu talagalay isku xirkeeda iyo mid ka mid ah waxay ku jirtaa cajalad si ay u qabato iyada oo aan godad laga qodin. Dabcan, waxaan u baahanahay inaan yeelano geed, laambad ama wax la mid ah si aan u adeegsan karno.
Si kastaba xaalku ha ahaadee iyo shaqsi ahaanba waxaan jecelahay inaan haysto xoog iyo xulashada ugu fiican had iyo jeer waxay maraysaa boorarka darbiga. Iyada oo leh laba dalool ayaa ku filan kamaraduna runtii way la nabadgeli doontaa iyaga. Intaa waxaa dheer, template ayaa lagu darayaa meelaynteeda waana mid aad u fudud.
Qaar ka mid ah qeexitaannada ugu muhiimsan ee kamaraddan amniga
Shaki la'aan qiimaha lacagta ayaa kufiican kamaradahaan Reolink iyo qeexitaannada ay leedahay ayaa xiiso u leh adeegsiga aan xirfadda lahayn ee kuwan. Qaabka fiidiyowgu wuxuu bixiyaa tayo ah 1080P oo wuxuu leeyahay xagal daawasho at 120 ° xagal, ku dar Micro SD, IP65, helitaanka fog, muraayadaha go'an, x6 zoom digital, xiriir WiFi: WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK, aragti madoow oo madow iyo midab ama midab leh, iftiiminta LED-ka, iyo makarafoon lagu dhex-dhisay iyo af-hayeen loogu talagalay dhageysiga-waqtiga dhabta ah iyo ka jawaab celinta
Halkan ka hel kamaraddaada Reolink Argus 3
Reolink Argus 3 Qiime
Kaamiradu waxay bixisaa wax kasta oo aad u baahan tahay in lagu rakibo adigoon iibsan wax kale, iyada oo horumar ah oo si buuxda loogu talinayo waxaan kugula talineynaa iibsashada tamarta qorraxda waxa kani ku darayo qiimaha ugu dambeeya ee kamaradda 29,99 euro.
Qiimaha kamaradu waa 133 euro waxayna u siisaa isticmaaleha xasilooni dheeri ah oo maskaxeed sababo nabadgelyo marka lagu daro fudeydka isku imaatinka. Noocyadan kamaradaha amniga ah waa kuwo fudud in la rakibo astaamahooduna runtii waa kuwo xiiso u leh inteena badan.
Si fudud loo isticmaalo loona rakibo
Kuma daro xeedho
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Reolink Argus 3, oo ah kamarad amniga dibadda aad u dhameystiran
GeekBench-kii ugu horreeyay ee processor-ka Apple Silicon A14X ayaa soo muuqda